Deg Deg: Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland oo ka qarxay gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDeg Deg: Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland oo ka qarxay gobolka Sanaag
Deg Deg: Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland oo ka qarxay gobolka Sanaag
July 18, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa saakay ka bilaabmay deegaanka Booda-Cade oo ku yaala gobolka Sanaag, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka iyo saraakiisha.
Dagaalkan ayaa imaanaya kadib markii Puntland ku eedaysay Somaliland in ay qalalaase ka wado gobolada Sanaag iyo Hayland iyadoo uga digtay in ay keeni karto isku dhac haddii faragalinta ay sii socoto.
Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa ku dagaalamay gobolka Sanaag sanadkii 2007.
Ma jirto warbixino ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka oo hadda la heli karo.
Dhaqso ayaa idiin kusoo gudbin doonaa wixii soo kordha.
Breaking: Heavy fighting between Puntland and Somaliland forces erupts in Sanaag region
Puntland oo wacad ku martay in ay la dagaalami doonto ururada argagixisada ah iyo ficilada burcadbadeeda
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa shalay oo Arbaco ahayd wacad ku maray in ay la dagaalami doonaan ururada argagixisada ah iyo ficilada burcadbadeeda. Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay gudaha Garoowe [...]
At least two Somali soldiers killed in Mogadishu car bomb
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least two Somali soldiers were killed when a car filled with explosives Wednesday exploded in Wadajir district of Mogadishu, security sources say. The car detonated when the soldiers were trying to defuse it, [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta oo Sabti ah dib ugu soo laabtay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Farmaajo ayaa kasoo noqday magaalada London halkaas oo uu uga soo qeybgalay shir-weyne [...]